MEGA 3.7.0 (254) Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 3.7.0 (254) လြန္ခဲ့ေသာ5ရက္က
Application မ်ား ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္း MEGA
MEGA ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
Mega အတူတူမိုဘိုင်း device များအတွက်ဆက်ကပ်အပ်နှံ apps များနှင့်အတူ, စံကို web browser များမှတစ်ဆင့်အသုံးပြုသူ-controlled encrypt လုပ်ထားသည်မိုဃ်းတိမ်သိုလှောင်မှုပေး chat ။ သာနှင့်ဘယ်တော့မှကျွန်တော်တို့ကိုအခြား cloud storage ပံ့ပိုးပေးမတူဘဲ, သင့်ရဲ့ဒေတာ encrypted ဖြစ်ပါတယ်နှင့်သင့် client ကိုက devices စာဝှက်ဖြည်ထားတဲ့။
ဘယ်နေရာမှာမဆို, မည်သည့်ကိရိယာမှမဆိုအချိန်ကိုအမည်ပြောင်းသို့မဟုတ်သင့်ဖိုင်တွေကိုပယ်ဖျက်, စတိုးဆိုင်, download, အစီး, အမြင်, ရှယ်ယာ, ရှာပြီးတော့သင့်ရဲ့စမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ် tablet ကနေသင့်ရဲ့ဖိုင်တွေကို upload ။ သင့်ရဲ့အဆက်အသွယ်တွေနဲ့ဖိုလ်ဒါ Share ခြင်းနှင့်စစ်မှန်သောကာလ၌သူတို့ updates များကိုကြည့်ပါ။ အဆိုပါစာဝှက်စနစ်လုပ်ငန်းစဉ် (သင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေး Key ကိုတက်ကျောထောက်နောက်ခံရှိမဟုတ်လျှင်) သင်ကသတိရရပါမယ်သို့မဟုတ်သင့်သိမ်းဆည်းထားဖိုငျမြားကိုမှဝင်ရောက်ခွင့်ဆုံးရှုံးပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ငါတို့သည်သင်တို့၏စကားဝှက်ကိုရယူသို့မဟုတ် reset မနိုင်ကိုဆိုလိုသည်။
end-to-end user က-encrypted Mega video chat စုစုပေါင်း privacy ကိုများအတွက်ခွင့်ပြု, နှင့်ဒါဟာမျိုးစုံ devices တွေကိုဖြတ်ပြီးလက်လှမ်း Chat history ကိုအတူကျွန်တော်တို့ရဲ့မိုဘိုင်း app မှတိုးချဲ့ထားပြီး 2016 ကတည်းက browser ကိုတဆင့်ရရှိနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးပြုသူများကိုလည်းအလွယ်တကူသူတို့ရဲ့ Mega မိုဃ်းတိမ်ကို drive ထဲမှတစ်ဦးကို chat ဖို့ဖိုင်တွေထည့်နိုင်သည်။
Mega ဆုကြေးငွေအောင်မြင်မှုများနှင့်အတူအားလုံးမှတ်ပုံတင်ပြီးအသုံးပြုသူများအများအတွက်ရက်ရက်ရောရော 50 GB အထိအခမဲ့သိုလှောင်မှုကမ်းလှမ်းနှင့်ကမ်းလှမ်းမှုများအများကြီးပိုမြင့်ကန့်သတ်နှင့်အတူအစီအစဉ်များကိုပေးဆောင်:
PRO Lite ကြေးပေးသွင်း: 4.99 တစ်လလျှင်€သို့မဟုတ် 49,99 €တစ်နှစ်လျှင်သင်သိုလှောင်ရန်နေရာနှင့်တစ်လလျှင်လွှဲပြောင်းခွဲတမ်း 1 တီဘီ 200 GB ကိုပေးသည်။
PRO ငါ subscription ကို: 9.99 တစ်လလျှင်€သို့မဟုတ် 99.99 €တစ်နှစ်လျှင်သင်သိုလှောင်ရန်နေရာနှင့်တစ်လလျှင်လွှဲပြောင်းခွဲတမ်း2တီဘီ 1 တီဘီပေးသည်။
PRO II ကိုကြေးပေးသွင်း: တစ်လလျှင် 19,99 €သို့မဟုတ်တစ်နှစ်လျှင် 199.99 €သင်သိုလှောင်ရန်နေရာနှင့်တစ်လလျှင်လွှဲပြောင်းခွဲတမ်း 8 တီဘီ4တီဘီပေးသည်။
PRO III ကိုကြေးပေးသွင်း: တစ်လလျှင် 29,99 €သို့မဟုတ်တစ်နှစ်လျှင် 299,99 €သင်သိုလှောင်ရန်နေရာနှင့်တစ်လလျှင်လွှဲပြောင်းခွဲတမ်း၏ 16 တီဘီ 8 တီဘီပေးသည်။
subscriptions တူညီသောကြာချိန်၏အဆက်ဆက် subscription ကိုကာလအဘို့နှင့်ရှေးခယျြသောကနဦးကာလကဲ့သို့တူညီသောစျေးနှုန်းမှာအလိုအလျှောက်သက်တမ်းတိုးနေကြသည်။ သင်၏စာရင်းပေးသွင်းမှုများစီမံခန့်ခွဲရန်, ရိုးရှင်းစွာသင့်ရဲ့ဟန်းဆက်ပေါ်တွင် Play Store ကို icon ကို click ပါ, (သင်ပြီးသားပြုကြပြီမဟုတ်လျှင်) သင်၏ Google ID နဲ့ sign in ထို့နောက် Mega app ကို click လုပ်ပါ။ သငျသညျရှိသင်၏စာရင်းပေးသွင်းမှုကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
WRITE_EXTERNAL_STORAGE -> သင့်ရဲ့ device ကိုမှ Mega မှသင်၏ဖိုင်များကို Download နှင့် Mega ရန်သင့် device မှဖိုင်တွေကို upload
ကင်မရာ -> ပုံတစ်ပုံကို ယူ. Mega မှသင်၏ဓါတ်ပုံများ upload
READ_CONTACTS -> အလွယ်တကူ Mega အဆက်အသွယ်အဖြစ်သင့်ရဲ့ device မှအဆက်အသွယ် add
RECORD_AUDIO & CAPTURE_VIDEO_OUTPUT (မိုက်ကရိုဖုန်းနှင့်ကင်မရာ) -> Mega အဆုံးမှအဆုံးသို့ encrypt လုပ်ထား Audio / Video ခေါ်ဆိုမှုများအတွက်ထောက်ပံ့
client-side code တွေရဲ့အားလုံးထုတ်ဝေခဲ့သည်သည် Mega စနစ်တွင်အသုံးပြုသူများက '' ယုံကြည်စိတ်ချမှုမြှင့်တင်ရန်, ဒါကြောင့်စိတ်ဝင်စားလုံခြုံရေးသုတေသီများ encryption ကိုဖြစ်စဉ်ကိုအကဲဖြတ်နိုင်ပါတယ်။ https://github.com/meganz/android: ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိုဘိုင်း app များ၏ကုဒ်အပေါ်တည်ရှိသည်
ပိုပြီးအင်ဖိုအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ website ကိုစစ်ဆေးပါ
MEGA အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
MEGA အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
MEGA အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
MEGA အား အခ်က္ျပပါ
confiavelstore စတိုး931.03k
MEGA ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း MEGA အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 3.7.0 (254)
ထုတ်လုပ်သူ Mega Ltd
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://mega.nz/#privacy
ဗားရွင္း: 3.7.0 (254)
လက်မှတ် SHA1: 0C:C7:F7:62:B2:B1:D3:E4:40:92:F2:C8:AB:8B:0E:B4:2E:5A:60:FD
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Mega Limited
အဖွဲ့အစည်း (O): MEGA
နယ်မြေ (L): Auckland
နိုင်ငံ (C): NZ
ပြည်နယ်/မြို့တော် (ST): Auckland
MEGA APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ